Aqoon isweydaarsi ku saabsanaa maqaamka Caasimadaha Federaalka ah ee dunida oo Muqdisho lagu qabtay”SAWIRRO” | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Aqoon isweydaarsi ku saabsanaa maqaamka Caasimadaha Federaalka ah ee dunida oo Muqdisho...
Aqoon isweydaarsi ku saabsanaa maqaamka Caasimadaha Federaalka ah ee dunida oo Muqdisho lagu qabtay”SAWIRRO”
Aqoon isweydaarsigaan qubarada wasaaradda Arrimaha Gudaha, federaalka iyo dib u heshiisinta Soomaaliya waxa ay ku soo bandhigeen nidaamyada ay ku dhisan yihiin caasimadaha wadamada qaatay nidaamka federaalka ah ee dunida.
Agaasimaha waaxda Fedraalka ee wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdinaasir Xaaji oo sharaxay nidaamyada kala duwan ee lagu maamulo caasimadaha federaalka waxa uu sheegay iney jiraan 3 maqaam oo kala ah, degmo caasimad federal ah sida magaalada Washintong ee caasimada Mareekanka, magaalo caasimad u ah dowlad goboleed iyo dowladda federaalka sida caasimada dalka Jarmalka ee Barlin iyo magaalo ku dhex taala dowlad goboleed oo ah Ottoawa Kanada sida uu sharxay.
Agaasimaha Guud ee wasaaradda Arrimaha Gudaha, federaalka iyo dib u heshiisinta Soomaaliya Mudane Cali Maxamed Maxamuud oo soo xiray Aqoon isweydaarsiga waxa uu sheegay in muhiimada ay aheyd in wax laga barto nidaamka ay ku dhisan yihiin caasimadaha wadamada federaalka ah ee dunida.
“Ujeedka waxa uu ahaa haba lakala duwanaado nidaamyada caasimadaha federaalka ah ee dunida in wax laga fahmo waa nuucee? ma caasimad dagmo ku taalaa, ma caasimaad gobol mise mid maamul goboleed kutaalaa? intuba wa ikhyaaraad guud oo imaan doonaa marka waxa ay aheed inaan keeno fakar guud oo lagu dul shaqeeyo” ayuu yiri agaasimaha.
waxa uu intaa ku daray inay sii wadayaan wadatashiyada iyo aqoon isweydaarsiyada ceynkani ah si loogu diyaar garoobo sameynta maqaamka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo ka mid ah howlaha ugu muhiimsan ee horyaala Barlamaanka Fedraalka Soomaaliya.